किसानलाई ‘साथी’ डिभाइसको साथ ! - Laltin Media
Home»आर्थिक समाचार»किसानलाई ‘साथी’ डिभाइसको साथ !
किसानलाई ‘साथी’ डिभाइसको साथ !
By लाल्टिन डट कम March 31, 2022 No Comments2 Mins Read
किसानले आफ्नो खेतको माटोको गुणस्तर तथा बालीनालीको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रयोगशाला धाउनुपर्ने तथा परीक्षणको नतिजा थाहा पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । यो काम अब आर्टीफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अर्थात् कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित ‘साथी’ डिभाइसले गर्ने भएको छ । महिला विकास समाजमा आबद्ध महिला प्राविधिक विज्ञ समूहले यो डिभाइस निर्माण गरी सार्वजनिक गरेको हो । किसानलाई तत्काल आइपर्ने समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले यो डिभाइस निर्माण गरेको महिला प्राविधि विज्ञसमूहका संयोजक लचना हाडाले बताईन् । जर्मनको टेक्निकल युनिभर्सिटी अफ म्युनिकबाट स्नातकोत्तर गर्नुभएका हाडाले त्यहाँ मुटु सर्जरीको सफ्टवेयर बनाउँदै आएकी थिइन् । उनले नै नेपालमा माटोको गुणस्तर नाप्ने साथी डिभाइसको आविष्कार गरेकी हुन् ।
नेपालका किसानले खेतीपाती गर्दा सामना गर्नुपर्ने विभिन्न किसिमका समस्यालाई साथी डिभाइसको प्रयोगबाट पहिचान गरी समाधानका लागि पहल गर्न सघाउने दाबी सो समूहले गरेको हो । कुन बाली लगाउने, खेतको माटोको गुणस्तर, बालीनालीको रोगको उपचारका लागि पहल गर्न सजग गराउन पनि यो डिभाइस सहयोगी हुने उनले दाबी गरिन् । यो डिभाइस इन्टरनेटबिना पनि प्रयोग गर्न सकिने भएकोले दुर्गम क्षेत्रका किसानले पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिने सो समूहले जनाएको छ ।
कम खर्चमा जडान तथा प्रयोग गर्न सकिने ‘साथी’ डिभाइस हार्डवेयर र सफ्टवेयर तयार गरिएको छ । हार्डवेयरका लागि केही खर्च लाग्न सक्ने उनले बताईन् । सफ्टवेयरले बालीनालीमा लाग्ने २६ किसिमका रोगको पहिचान पनि गर्न सक्छ । हाल यस डिभाइसले धान, गहुँ, केरा, गोलभेँडा, आलु जुट तथा कफीलगायत २३ किसिमका बालीमा लागेको रोग पत्ता लगाउन सक्ने समूहले जनाएको छ । यस एप्स एवं डिभाइसको परीक्षण काठमाडौँको सतुङ्गल र फर्पिङमा गरिएको थियो ।
#किसानलाई ‘साथी' डिभाइसको साथ !